နိုင်ငံတကာ ကျောင်းတွေ နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေ ပြဿနာ - News @ M-Media
နိုင်ငံတကာ ကျောင်းတွေ နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေ ပြဿနာ
in သူ့အမြင် — May 3, 2017
Copy illustration image
မေ ၃ ၊ ၂၀၁၇
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်မရှိလို့ Horizon International school ကျောင်းကို ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနက တရားစွဲ ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။
အဲဒီ သတင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်မရှိပဲ ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့အတွက် သာကေတ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ဒေါ်သန်းသန်းဦးက ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ အမှု့ဖွင့်တိုင်တန်းထားတယ်ဆိုပြီး မေလ ၂ ရက်နေ့ထုတ် The Voice Daily news နဲ့ The Voice website (http://thevoicemyanmar.com/news/8147-kpk ) တို့မှာ ဖေါ်ပြ ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ အလားတူ အခြားသော ဂျာနယ် တစ်ချို့မှာလည်း ဖေါ်ပြထားတာကို တွေ့ရတယ်။
အဲဒီမှာ တွေ့ရတာက ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေကို ” ၂၀၁၁-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလဆန်းက အတည်ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ယင်း ဥပဒေ အခန်း(၆) တားမြစ်ချက်များ၊ အခန်းပါ ပုဒ်မ (၂၈) တွင် ‘ မည်သူမျှ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် မရှိဘဲ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း မပြုရ’ ဟု ပြဌာန်းထားသည်”-တဲ့။
ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဟုတ်သလိုလိုပဲ။ သာမာန်အားဖြင့်တော့ လိုင်စင်မှ မရှိတာ။ တရားစွဲဆိုခံရမှာပေါ့ လို့ ထင်ကြမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ –
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆိုတာ ဘာလဲ ? မည်သူမျှ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် လိုင်စင်မရှိပဲ ဆိုတာ ဘာလဲ? သေခြာ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုဖို့ . . . . . သေခြာ စဉ်းစားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေလက်စွဲမှာ ‘ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း’ ဆိုသည်မှာ ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
အခန်း (၁) အမည်နဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖေါ်ပြချက် ၊ ၂ (က) မှာ –
#ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆိုသည်မှာ ပညာရေး အရည်အသွေး မြင့်မားရေးအတွက် ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သော အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် သင်ရိုးမာတိကာများပါ ဘာသာရပ်များအတိုင်း ဖြစ်စေ၊ အဆိုပါ ဘာသာရပ်များအတွက် သင်ခန်းစာများ ထပ်ဆောင်း၍ ဖြစ်စေ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော ပုဂ္ဂလိက တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သည့် အခြေခံပညာ ကျောင်း ကို ဆိုသည်။”
လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးထားတယ်။
အဲဒီတော့ Horizon ကျောင်းတွေဟာ (ကျွန်တော်သိရသလောက်) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြဌာန်းထားတဲ့ သင်ရိုး ညွှန်း တမ်းကို သင်ကြားပေးခြင်းလည်း မရှိဘူး။ သင်ရိုး မာတိကာတွေကလည်း အစိုးရ အခြေခံပညာကျောင်းက ဘာသာရပ်တွေ အတိုင်း လေ့ကျင့်ပေးခြင်းလည်း မရှိဘူး။ ထပ်ဆောင်းပေးခြင်းလည်း မရှိဘူး။ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ သင်ရိုးအတိုင်းသာ သင်ပေးနေခြင်း ဖြစ်တယ်။ အဲဒီကျောင်းက နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုသာ သင်ကြား ပေးတဲ့ ကျောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျောင်းသားမိဘတိုင်းက အသိပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ courses တွေနဲ့ သင်လာတာ လဲ ၁၇ နှစ်လောက် ရှိပါပီ။
တကယ်တမ်းပြောရယင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြဌာန်းထားတဲ့ သင်ရိုးညွန်း တမ်းနဲ့ သင်ပေးတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်လို့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင် ဥပဒေထဲမှာ ပါတဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေနဲ့ အကျုံးမ၀င်တဲ့အတွက် မှတ်ပုံတင်ဖို့တောင် မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဥပဒေ အရလည်း ဘယ် international school မှ မှတ်ပုံတင်လို့ မရသေးပါဘူး။
၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲမှာ ရေးထားပြီး မပြဋ္ဌာန်းရသေးတဲ့ နည်းဥပဒေ မူကြမ်း အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဖြစ်လာနိုင် စရာ ရှိပေမဲ့ international schools တွေအနေနဲ့က မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို သင်နေတာ မဟုတ်တော့ မှတ်ပုံတင်စရာ မလိုသလို တင်ချင်ရင်လည်း တင်လို့ မရသေးဘူးဆိုတာတော့ လူတိုင်း နားလည်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် မေးမြန်းကြည့်တော့ အဲဒီ Horizon ကျောင်းတွေဟာ နိုင်ငံတကာ ပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများဖြစ်တဲ့ IGCSE , IB စတဲ့ ဒီပလိုမာ သင်တန်းတွေကိုသာ ပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားတဲ့ IB (International Baccalaureate® ) ဒီပလိုမာကို အောင်မြင်စွာပေးနိုင်တဲ့ ကျောင်းဆိုလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Horizon နဲ့ ISY ကျောင်းတွေပဲ ရှိပါသေးတယ်။
အဲဒါအပြင် Horizon ကျောင်းတွေက UK နိုင်ငံ Cambridge University ရဲ့ IGCSE Exam Centre အဖြစ် အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ ကျောင်းလည်း ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဆိုရင် Horizon ကျောင်းက UK နိုင်ငံ Cambridge University ရဲ့ IGCSE Exam Centre နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်နေတာကို သွားတွေ့ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စာစစ်ဌာနနဲ့တောင်မှ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ သင်လည်းမသင်ဘူး။ အောင်လက် မှတ်လည်း မထုတ်ပေးဘူး။
အဲဒါကို လွယ်လွယ်ကူကူ နားလည်နိုင်ဖို့ ပြောရယင် အလွတ်ကျက် (Parrot Learning) ကိုထိုးဖောက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် တွေး တော စဉ်းစားတီထွင်နိုင်တဲ့ (Creative Learning) နည်းစနစ်နဲ့ ကလေးတွေကို တီထွင်တွေး ဖြစ်အောင် သင်ကြား ပေး နေတဲ့ ကျောင်းပါ။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆိုတဲ့ Definition အရ Horizon International schools ကျောင်းတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲမှာ မ၀င်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနက အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ သင်ရိုးညွှန်း တမ်းတွေကို သင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးကို သင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်နဲ့ ပတ်သတ် ပြီး ဘာမှ မဆိုင်တာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အတိုချုံး ထပ်ပြောရခြင်း ဖြစ်တယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆိုတဲ့ Definition နဲ့ လွဲနေတဲ့အတွက် သူတို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှာလဲ?
ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း ကျောင်း(school) ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရစကားလုံးကြောင့် နားလည်မှု့ လွဲနေတယ်လို့ပဲ ယူဆမိတယ်။ နောက်ပြိးတော့ မှတ်ပုံမတင်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်သိရသလောက် အစထဲက အမျိုးသားစီမံကိန်း ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ကုမ္ပဏီ ထူထောင်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်တယ်။ တခြား နိုင်ငံတကာကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့ International School တွေကလည်း အလားတူ ကုမ္ပဏီတွေ ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ပဲ သင်ကြား ပေးနေခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့အနေနဲ့ တင်ရင်လည်း တင်ဖို့ အဆင်သင့်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီကိစ္စကို ပြည်သူ့အစိုးရလို့ ခေါ်တဲ့ အန်အလ်ဒီ အစိုးရကို မေးချင်တာက-
#လူမှု့ဘ၀ ကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ KTV၊ မာဆတ်၊ အရက်ဘီယာဆိုင်တွေကိုတော့ လိုင်စင်ရှိသယောင်ယောင် ဘုံးဘောလအော နေရာတိုင်းမှာ လက်ညိုးထိုးမရှောင် ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပေးပြီးတော့ ‘ပညာရေးနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက် အံ့’ လို့ ကြွေးကျော် လာခဲ့တဲ့ အန်အလ်ဒီ အစိုးရ လက်ထက်ကျမှ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းတကျောင်းကို ပိတ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သမိုင်း၊ ရာဇ၀င် ရိုင်းတော့မှာလား ဗျာ။
တရားမျှတမှု လိုလားသည် (Feb 1, 2013)
Horizon International School ရဲ့ သချာင်္ဥာဏ်စမ်းပြိုင်ပွဲ (Nov 24, 2012)
ဟိန္ဒူ မိသားစုဥပဒေ (Nov 10, 2012)
အိမ်ထောင်ခန်းဆိုင်ရာ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေ (Oct 19, 2012)
Tags: Education In Myanmar, Horizon, International School, Myanmar Law